पाँच जना युवाको व्यावसायिक यात्रा – हाम्रो समाधान
पाँच जना युवाको व्यावसायिक यात्रा
टीकापुर ०७ पौष / कैलालीको टीकापुरका पाँच जना युवाहरूले संयुक्त ब्यबसाय सुरु गर्नुभएको छ । सामाजिक क्षेत्रमा फरकफरक पेसामा आबद्ध रहेका युवाहरूले एक्लै ब्यबसाय संचालन गर्न नसकिने भन्दै संयुक्त लगानीमा ब्यबसाय सुरु गर्नुभएको हो ।
कैलालीको टीकापुर नगरपालिका वडा नं. १ का यमबहादुर शाह पेशाले स्वास्थ्यकर्मी हुन्हुन्छ । उनले ६ वर्ष गुल्मीमा स्वास्थ्यकर्मीको रुपमा काम गर्नुभयो । करिब १० महिनापहिले सरुवा भएर टीकापुर नरगपालिकामा आएका सिनियर अहेव शाह अहिले गुल्मीमै रहदा केही ब्यबसाय गर्नुपर्छ भन्ने योजना बनाउनुभएको थियो । तर के गर्ने भन्नेमा शाह आफै दोधारमा रहनुभएको थियो । साथीहरूसंग चिया पसलमा भएका गफले उहाँलाई होटेल ब्यबसाय गर्ने आट आयो । उहाँमा आट मात्रै आएन दैनिक चिया गफमा कुरा हुँदै जादा चार जना अरुपनी होट्लमा लगानी गर्न मन्जुर भए ।
जागिरसँगै होटल व्यवसायीको रुपमा चारजना अन्य सहकर्मीलाई जोडेर टीकापुर नगरपालिका वडा नं. १ पार्क रोडस्थित टीकापुर भिजिट एग्रो रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याउनुभएको छ । साझेदारीमा रहेका पाँच जना फरकफरक क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ । ‘योजना पहिले नै बनाएको थिएँ । एक्लैले व्यवसाय गर्न आँट पुगेन ।’ शाहले भन्नुभयो , ‘जागिरले घर परिवार चलाउन ठीक्क छ । केही आम्दानीका लागि भए पनि व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भएर नै व्यवसायमा लागेको हुँ ।’ उहाँले जागिर सकिए पछिको बाकी जिबनलाई चलाउन पनी ब्यबसाय नै महत्त्वपूर्ण रहने भन्दै अफिस समयभन्दा बाकी रहेको समय ब्यबसायका लागि खर्च गर्दै आएको बताउनुभएको छ ।
त्यस्तै, कैलालीकै जानकी गाउँपालिका वडा नं. ८ खैरीपुरका सुरत विश्वकर्मा २०७१ सालमा रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया पुग्नुभयो । उहाँ पाँच वर्ष मलेसियामा गरेको परिश्रमले स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने आँट आयो । तर के गर्ने भन्ने कुनै योजना बनाउन नसक्नुभएका शुरत अहिले त्यही रिसोर्टको एक लगानीकर्ताको रुपमा रहनुभएको छ ।
१२ कक्षासम्म अध्ययन गरेका सुरत मलेसियामा रहँदा होटल लाइनमा गरेको कामको अनुभवलाई स्वदेशमा प्रयोग गर्न लागेको बताउनुहुन्छ । ‘विदेशबाट फर्कदा स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति बनाएर फर्केको थिए ।’ सुरतले भन्नुभयो, ‘होटलमै काम गरेको हुँदा होटल नै सञ्चालन गर्ने योजना थियो । तर, साथीहरुसँगको चिया गफबाटै सुरु भएको सहकार्यमा ठूलो लगानी लगाएर व्यवसायिक रुपमा जोडिएको हुँ ।’ उहाँले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा एक्लैले सोचेअनुसारको व्यवसाय गर्न नसकिने बताउँदै साझेदारीमा गरेको व्यवसायमा टिक्न सके राम्रो आम्दानी गर्न सकिने बताउनुभएको छ । ‘एक्लैले ठूलो पूँजी लगानी गरी व्यवसाय सुरु गर्न सक्ने अवस्थाका हामी छैनौं ।’ सुरतले भन्नुभयो, ‘भावनात्मक रुपमा कुरा मिल्ने साथीहरुसँग काम गर्दा त्यसले बृहत रुप लिन सक्छ । त्यही सोचका साथ हामिले व्यावसायिक यात्रा तय गरेका हौ ।’
भिजिट रिसोर्ट टीकापुरका अर्का लगानीकर्ता टीकापुर नगरपालिका वडा नं. २ का राजेश विश्वकर्मा पेशाले राजनीति क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ । उहाँले २०६६ सालदेखि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) हुँदै अहिले नेकपामा आबद्ध भएको बताउँदै राजनीतिका लागि पनि व्यवसायिक पाटो महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । ‘राजनीति एउटा नसा हो । जुन क्षेत्रमा आबद्ध भइसकेपश्चात् त्यहाँबाट बाहिर निस्कन निकै गाह्रो हुन्छ ।’ राजेशले भन्नुभयो, ‘राजनीतिसँगै व्यवसायमा पनि नजोडिने हो भने भविष्य नै डामाडोल हुने अवस्थामा पुग्छ र कैयौंको पुगेको पनि छ । हामी कुरा रोजगारीका गर्छौ तर आफै व्यावसायिक बन्न सकेका हुदैनौ । जनताले बिश्वास गर्ने आधार पनि पहिले व्यावसायिक बन्नु नै हो ।’
उहाँले नमूनाको रुपमा रहेको टीकापुर पार्क पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै त्योसँगै भिजिट एग्रो रिसोर्ट टीकापुर सञ्चालनमा ल्याएकोले राम्रो आम्दानी हुने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो । ” नेपालमा पर्यटन, कृषि र हाइड्रोपावरमा गरिएको लगानिले सफलता पाउनेमा दुई मत छैन ।” राजेशले भन्नुभयो, ” पर्यटन क्षेत्रसंग होटल ब्यबसाय जोडिएको छ । त्यसैले पनि हामी सफल हुन्छौ जस्तो लाग्छ ।” उहाँले रिसोर्टका सञ्चालकहरु कुनै न कुनै माध्यमबाट सामाजिक क्षेत्रमा जोडिएको बताउँदै रिसोर्टले गरेको आम्दानीको १० देखि १५ प्रतिशत समाज सेवामा खर्च गरिने बताउनुभयो । “हाम्रो आम्दानीको १० देखि १५ प्रतिशत रकम सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने सहमती भएको छ । जस्ले समाजमा घुलमिल हुन पनि हामिलाई सहज होला ।” राजेशले भन्नुभयो ।”
पारिवारिक र बालबालिका–मैत्री रिसोर्ट सञ्चालन गरिएको बताउँदै राजेशले रिसोर्टलाई एग्रो फर्मतर्फ परिणत गरिने र बिस्तारै पब्लिक सेयरको लागि पनि आव्हान गरिने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभएको छ । साढे १० कठ्ठा क्षेत्रफलमा रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । रिसोर्टभित्र बाल बगैचा, नेपालको धरहरा, नेपालको नक्सा, सगरमाथा लगायतका डिजाइनहरु बनाइएका छन् ।
करिब ७० लाखको लगानीमा निर्माण भएको उक्त रिसोर्टमा शैक्षिक पेशामा आबद्ध मीना चौधरीको पनि लगानी रहेको छ । उहाँ दिनभर बिद्यालयमा बिद्यार्थीलाई अध्यापन गराउनुहुन्छ । आफ्नो फुर्सदको समयमा उहाँले रिसोर्टलाई पनि समय दिदै आएको बताउनुभयो । चारजना पुरुषसंगको साझेदारीमा मिना एक्लि महिला लगानिकर्ताको रुपमा रहनुभएको छ । ” पुरुषहरु व्यावसायिक रुपमा महिला भन्दा दक्ष हुन्छन । उहाँहरुले दुनिया बुझ्ने अवसर पनि पाएका हुन्छन ।” मिनाले भन्नुभयो, ” उहाँहरुसंग गरेको लगानी डुब्दैन भन्ने बिश्वासले म पनि जोडिएकी हु ।” उहाँले महिलाहरू पनि घरायसी कामकाजमा मात्र सिमित नरही व्यावसायिक रुपमा बाहिर देखिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । रिसोर्टको पाचौं लगानीकर्ताको रुपमा युवा विद्यार्थी जनक चलाउने रहनु भएको छ । उहाँ अध्यनको शिलशिलामा बाहिर भएपनी साथीहरूको बिश्वासले रिसोर्टमा लगानी गर्नुभएको छ । एक वर्षभित्र धनगढी र कोहलपुर शाखा बिस्तारको तयारीमा उहाँहरु रहनुभएको छ । अहिले रिसोर्टमा १० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी समेत पाएका छन ।
सेरि पुल देखि खाल बजार सम...
PrevPreviousसंघीय संसद बिगठनले प्रदेशलाई असर पर्दैन : मन्त्री बोहरा
Nextनेकपाको कैलाली पार्टी कार्यालयमा तालाNext